Candlestick amashadi (futhi lapha, yebo, azange abe engqondweni amaJapane inhlansi ipulaki) zisekelwe idatha efanayo ibha njalo amashadi, kodwa kubonakala sengathi uma kungenjalo. izingxenye zabo Uvula intengo kwesikhathi ukuhweba kanye lokuvala, kanye esiphezulu kanye namanani ubuncane nganoma yisiphi isikhathi ekhethiwe isikhathi - masonto onke, nsuku zonke noma Intraday.
Lihlela isilinganiso phakathi kwama amazinga amanani kokuqala nokokugcina lwakha umdwebo emzimbeni. Uma intengo yokugcina ingaphansi kwe-kuqala, bese umzimba ababethi abamnyama. Uma kungenjalo, emhlophe. La manani abalulekile abahlaziyi usebenzisa lwezibani ukuhlaziywa.
Inani ukunyakaza phezulu naphansi libizwa kwethunzi. Kuye esikhulu kanjani ibanga phakathi amanani ziphakeme futhi ongaphakeme futhi umzimba lwezibani, izithunzi kungaba eside noma esifushane.
Technical ukuhlaziywa lwezibani ishadi kusikisela noma okwehlisa emakethe mkhuba, noma ngethuba lawo. Kubalulekile ukuqonda ukuthi kukhona ubudlelwano phakathi amaphethini kushintsha izinhlobo ezahlukene. Ngokwesibonelo, ukuhlaziywa ubikezela lwezibani usuku ukubuyiselwa emuva ukhiye mkhuba nge "inkunzi" noma "bear" isango.
Abahwebi bathanda ukusebenza nge amakhandlela, ngoba zibonisa ukuziphatha batjalimali intengo ehlukile, kodwa elula iphethini, okungase kalula kuhlangene nezinye amathuluzi lokuhweba. Amashadi kungenziwa ihlaziye ngaphandle ukubambezeleka isikhathi, futhi emakethe kungenziwa waqashwa ubudlelwane phakathi intengo ukuvulwa, ubuncane, esiphezulu bese uvale ikhandlela ngamunye.
Okuvamise waphawula inhlanganisela zezibani kahle Fibonacci ukuhweba amathuluzi. Umfundi nesithakazelo uzothola a lot of izincwadi, echaza kubo ngokuningiliziwe.
"Hammer" futhi "Hung"
Japanese candlestick amaphethini abizwa ngokuthi "isando" uma banayo nemiphumela emihle nehlala njalo, nomzimba omncane (emnyama noma emhlophe), etholakala eduze okusezingeni eliphezulu nsuku zonke. Ekupheleni a downtrend, "Hammer" kubhekwa isiginali "inkunzi" ithuba.
Lezi zibalo kufanele kube isithunzi ngokwanele eside. Kahle kahle, kuba kathathu ubude emzimbeni. nehlala ebonisa ukuthi intengo emakethe uwile ngokucijile kakhulu emva yokuvula, bese zibuyiswe ekupheleni uhwebo. Intengo kokuqala nokokugcina kufanele zitholakale eduze komunye nomunye, okuholela emzimbeni ikhandlela kushadi kuyoba encane.
Ekupheleni i uptrend uhlobo olufanayo ubizwa ngokuthi "walengiswa." Lesi sibalo kubuye kube inkomba yokuthi ukusabalala. amasignali candlestick ukudayiswa ziphakame uma intengo emakethe ngidayisa ngezansi intengo ubuncane "walengiswa" ezinsukwini ezimbalwa ezizayo. Ngezinye izikhathi ngisho ephephile balinde kuze Sengiphetha, ukuqinisekisa lokhu.
"Inkunzi" futhi 'bathela "ukubamba
Lawa izinhlobo zezibani, intengo ukuvulwa okuyinto aphansi kakhulu ( "inkunzi") noma okusezingeni eliphezulu ( "bathele"). The eside emzimbeni, maningi amathuba kushintsha mkhuba.
Lapho intengo kokuqala ngosuku olulandelayo phezu eside, kungenzeka ukuthi emakethe ngeke akhuphuke. ' Ngakolunye uhlangothi, uma Ngakusasa ingaphansi, abahwebi bangalindela emakethe uzoqhubeka ukunqaba.
"Iwindi" ( "izikhala")
"I-Windows" njengoba zibizwa kanjalo eJapane, noma "izikhala" kukhona umqondo obaluleke kakhulu e analysis lobuchwepheshe. Noma nini kukhona igebe, isb. E. Intengo lwamanje ayifani kuvulwa lokuvala intengo esedlule, lokhu kusho ukuthi kule isikhawu kwakungekho intengo kanye nokuhweba ivolumu.
Clearance ngenhla kwenzeka uma intengo kokuqala usuku lwesibili ngaphezu ekupheleni kuqala. Kunalokho, igebe ezansi kunjalo uma ngenhla. Windows ingaba njengesihluthulelo umugqa ukumelana ne ukwehla kwamanani futhi sisekele ukukhula kwabo. Ngokuvamile amanani ozama uligcwalise ngemva igebe, bese ukushintsha isiqondiso futhi uqhubeke ukuhamba kwayo bebheke iwindi.
"Amabili lama amagwababa"
"Igebe" phezulu kulandele amabili amafushane amakhandlela amnyama, sifana Negwababa "bearish" sibalo. Kwenzeka lapho emakethe ekhula kuvula nge "ifasitela", kodwa highs ezintsha angeke igcinwe futhi emakethe Ubumba ikhandlela abamnyama. Iseshini lwesithathu udonsela nakakhulu 'bethela "isithombe nge high ezintsha, futhi nangenye kuhlulekile umzamo ukuzigcina eduze. Uma ngosuku olulandelayo, amanani angeke kubuyise ukufinyelela ukuphakama, kulindelwe ukuba bawe.
"Three Black Liyakhala"
Lesi sibalo siqukethe elandelanayo amakhandlela abathathu abamnyama falling amanani kokuvula phakathi nomzimba we ngamunye kulowo odlule. nokwehla emakethe Ethi, uma kukhona ukwanda eside noma ngamanani aphezulu. Ihlangana kukho lapho intengo ukuvulwa ngayinye ikhandlela elilandelayo kuvumelana intengo sokuvalwa sangaphambilini. Ibizwa ngokuthi okufanayo iqhude amathathu kubonisa namandla ngokukhethekile 'bethela "emakethe.
"Bearish" futhi "bullish" abatholako
Kanye zokwakheka olulodwa, "isando", "walengiswa" futhi "bamba" izibalo ukumuncwa ukulungiswa inhlanganisela kudinga njalo zezibani ezimbili. ukuhlaziywa sokuqhafaza "inkunzi" ukunquma isikhathi ukumuncwa baphendukela ekupheleni a downtrend. Lokhu kwenzeka uma umzimba ende emhlophe kutsetselelwe umzimba sangaphambilini amakhandlela encane emnyama. Akunandaba bumunca emthunzini izolo noma cha.
"Bear" kuyinto ukubaluleka ukumuncwa ekupheleni ukukhula Amathrendi. Kulokhu, ende emnyama ikhandlela ihlanganisa emzimbeni odlule ezimhlophe iDemo.
Lesi sibalo futhi isiphambano "Harami"
Ezakhiwe amakhandlela ezimbili futhi uhluke ezandulele. Ngo bendabuko ishadi ukuhlaziywa, ubizwa ngokuthi "usuku ngaphakathi".
Ngo "Harami" umzimba ezincane (yanoma yimuphi umbala), kanti lokhu kuhambisana owedlule eside. Akunandaba, kungakhathaliseki kulesi simo kwagcwaliseka umthunzi. Isibalo kubalulekile uma kwenzeka ukuthi ekupheleni a downtrend namuhla emzimbeni encane emhlophe futhi lungaphezu black ikhandlela odlule. isignali jika aqinile namuhla lapho umzimba lincane kakhulu. Ngemva ukwehla mkhuba ukuma kungaba "sezinkomo" isignali, futhi ekupheleni the uplink - ". Bear"
Cross "Harami" uhlobo olukhethekile sibalo, lapho ikhandlela umzimba lanamuhla sifushane kakhulu, t. E. isiqalo nesiphetho uhwebo intengo Cishe efanayo.
Figure "Dodge," ithola lapho decelerated izimakethe ishayela. Amakhandlela Bheka "Dodge," unomzimba esifushane kakhulu (kokuqala intengo yokugcina kucishe), ngenhla noma ngezansi esemgwaqweni nemiphumela emihle nehlala njalo.
Lokhu lwezibani ukuhlaziywa inhlanganisela okuyinto kuphela isithakazelo ekupheleni boom eside noma libanjwe. Zibalulekile kubo lapho kumiswa ukumuncwa sibalo.
Lesi sibalo libukeka nje imodeli "inkunzi" ukumuncwa, futhi sisebenza kuphela ekupheleni mkhuba phansi, ngenkathi ezinsukwini zokugcina eside ikhandlela elimhlophe namuhla ihlanganisa iDemo odlule.
Esiginali imigqa permeation kwenzeka uma lanamuhla ezinkulu ikhandlela elimhlophe ihlanganisa okungenani u-50% abamnyama odlule. Nge ezikhulayo isithakazelo ukugqagqana black umzimba nomhlophe kwandisa amandla ngoshintsho mkhuba.
"I isihenqo amafu amnyama"
Lokhu lwezibani ukuhlaziywa inhlanganisela esihlinzeka isignali ye mkhuba Ukubuyiselwa emuva ekupheleni kwesikhathi ukukhula. Kulokhu, a black eside kufanele amboze okungenani isigamu ezimhlophe, kwakheka ngayizolo. Nge nesilinganiso esikhula umgwengwezi kuzokhulisa ematfuba umkhuba izinto zizoshintsha.
Kumiswa sibalo lapho umzimba ezincane (yanoma yimuphi umbala) uyashiywa inhlansi eside kwakhiwa ngaphambi, igebe intengo. Umzimba kungase kumthinte umthunzi ezidlule, kodwa hhayi umzimba. Uma "inkanyezi" asisifushane, futhi kukhona "doji" (yokulingana kokuqala intengo sokugcina), amakhandlela okuthiwa "doji inkanyezi". Namasiginali ngoshintsho okuseduze mkhuba.
"Izinkanyezi" - a izici lwezibani, isicelo okuyinto zimi kanje. Morning Star kuyithuba sibalo aphansi ezakhiwe amakhandlela amathathu. Eyokuqala Unomzimba black eside, isb. A. Ingabe ingxenye downtrend. Esesibili - inkanyezi nge umzimba zishesha kakhulu elise ngezansi sangaphambilini, ongakaphathelani ke. Long lwesithathu White ihlanganisa okungenani isigamu ubude umzimba black izinsuku ezimbili ubudala. Kungakuhle umzimba lwesithathu kufanele adayiswa ngokwehlukile "izinkanyezi" ngayizolo. Uma ikhandlela lwesithathu elisibekelayo, futhi kuwuphawu ngokucacile ushintsho mkhuba.
Lokhu lwezibani ukuhlaziywa inhlanganisela okuyinto ubikezela izinto zizoshintsha mkhuba ngemva phezulu eqinile. Baphinde ziqukethe amakhandlela amathathu. Eyokuqala - ende emhlophe. Okulandelayo "inkanyezi" enomzimba emnyama noma emhlophe engenaxhumo kulowo eyedlule. Olumnyama sesithathu umzimba eside esehlanganise okungenani u-50% wokuqala. "Inkanyezi" nezokugcina umzimba black eside kufanele futhi ube nenani le-gap. Uma kukhona "bearish" ukumuncwa, kule constellation futhi uphawu ukushintsha mkhuba kweqiniso.
Kuyinto isignali enamandla ukuthi kuyanda intengo badiliza ngokucijile. Lesi sibalo kufanele kwafunwa ukunyukela eside, eyaphumela ikhandlela nge black emzimbeni iDemo. "Shooting Star" libonisa ngokucacile ukuthi imakethe ukuhlaba ikhefu ukuze uzindle zamanje kwamanani.
Zezibani: izici zohlelo lokusebenza
Izibalo enze kube nokwenzeka ukuba ngeso lengqondo ukushesha kanye deceleration mkhuba noma akhombise ushintsho yabo.
"The Hammer" kukhulunywa ngayo kaningi ekupheleni a downtrend futhi kubhekwa uphawu "inkunzi" ithuba. Le nkomba lwezibani ukhuluma ngesidingo ukuthenga ngosuku odlule. A stop order isethwe ngezansi inani eliphansi kosuku odlule.
"I walengiswa Man" kulingana "isando" ekupheleni i uptrend. Kufanele ukuthengisa lapho lesi sibalo, uma kwephulwe ubuncane bayo. A stop order kuleli cala isethwe ngentengo esiphezulu "walengiswa."
"Bullish" ukumuncwa ngokuvamile kwenzeka ekupheleni mkhuba phansi bese ukhomba izinto zizoshintsha yayo. Ukusetshenziswa zezibani ukuthenga ngesikhathi isiqongo kosuku enomzimba ende emhlophe. A stop order isethwe ngezansi eliphansi amakhandlela ezinkulu noma ezincane, kuye ngokuthi yimuphi kubo ayoba sibe sincane.
"Bearish" ukumuncwa ngokuvamile kwenzeka ekupheleni i uptrend. Nxa ethengisa isezingeni ubuncane ende emnyama lwezibani. A stop order isethwe ngenhla ongaphakeme esiphezulu noma okusezingeni eliphezulu, kuye ngokuthi yimuphi kubo mkhulu.
"Harami" - lwezibani ukuhlaziywa inhlanganisela okwenza Singakwazi yini ukuthola ushintsho ekupheleni le uptrend noma downtrend. Isibalo awahlobene nezimo zezimakethe zamanje. Ekupheleni kwe-phansi mkhuba isignali Thenga ngeke sampula amakhandlela okusezingeni eliphezulu nge umzimba emhlophe eside. A stop order ibekwe ongaphakeme kosuku. Uma sampuli okungenani ikhandlela nge black umzimba eside, it is a isignali ukuthengisa ekupheleni kuyibika phezulu. A stop order isethwe esiphezulu sama ngalolo suku oluthile.
"Inkanyezi yokusa" libhekisela ukuhamba mkhuba phezulu emakethe. Kufanele uthenge at ikhandlela esiphezulu kwesokudla enomzimba ende emhlophe. A stop oda okungenani ikhandlela elincane phakathi sibalo.
"Evening Star" kubonisa umkhuba phansi. Kumele lithengiswe ngesikhathi esifanele okungenani black ikhandlela. A stop order ibekwe esiphezulu encane, etholakala maphakathi sibalo.
Visa umbuso futhi amathemba imboni yezokuvakasha eRussia
Ikhava Integral. Izinhlobo Ukubophezeleka izincwadi. Ihlanganisa for ngibopha